Iyo Pad, iyi ndiyo shongwe iri kuvakwa muDubai iyo yakavakirwa pane iPod | Ndinobva mac
Chivako chatiri kuzokuratidza chinotevera chakanzi "Iyo Pad". Ichi chivakwa chine nhurikidzwa makumi maviri nemana chiri kusvika kumagumo. Zviri Kuvaka muDubai uye dhizaini yayo yakavakirwa paPod yakaiswa padoko kubva kuApple. Saizvozvowo, mugadziri wePad anga avewo nebasa rekuizadza netekinoroji kuti hupenyu hurerukire varimi. Tichakuudza zvimwe: yakasanganisira tekinoroji yakawanda zvekuti inoienzanisa nesutu ye Iron Man, inozivikanwa Marvel hunhu.
Iyo Pad chivakwa chave chiri kuvakwa muDubai kwechinguva. Iri guta, rinova imwe yenzvimbo huru dzevashanyi dzekutenga, rinotifadzawo nechivako chakareba kwazvo pasi rose: iyo Burj Khalifa, ine hurefu hwemamita 823. Y mumutsara uyu - kwete kubva pakureba - asi kubva pachiratidzo chinoda kuve Iyo Iyo Pad.
Iyo yekuvaka uye dhizaini yakaitwa neakakurumbira Hong Kong dhizaini James Mutemo. Haisi nguva yekutanga kuti Mutemo ushamise veruzhinji nezvivakwa zvisina kujairika. Mumwe muenzaniso unenge uri OPod Tube chivakwa, cylindrical kongiri zvivakwa zvakashandurwa kuita dzimba dzine hunyanzvi hwakawanda mukati.
Nekudaro, nhanho yekuwedzera yakatorwa neprojekti inonzi Iyo Pad, chimiro hofori chine nyaya makumi maviri nenhanhatu dzakakwirira dzinovakisa dhizaini yayo paPod. Saizvozvo, uye maererano nezvakataurwa kubva Business Insider: «Iyo Pad inovavarira kubatanidza tekinoroji, Software uye kuvaka kuvaka zvivakwa zvinopindura zvirinani kune zvido nezvishuwo zvevanhu vemazuva ano. "
Asi kwete chete kushamisika kwayo kwekunze, asi iyo yemukati ichakwevawo pfungwa dzako. Uye, sezvatakambotaura, izere netekinoroji mudzimba dzayo makumi maviri nenomwe dzinoigadzira. Vose zvavo vane mavara RFID panzvimbo pemakiyi; imba yekugezera inoongorora uye inopa chaiyo-nguva mishumo nezve hutano hwevaridzi; kana chirongwa chaicho chechokwadi mukamuri yega yega inonzi "iReality". Iyo inogadzira mifananidzo otomatiki uye inozochinja yega. Pfungwa iyi ndeyekuratidzira kusvika kune makumi matanhatu nenhanhatu enzvimbo dzevashanyi kutenderera pasirese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Iyo Pad, iyi ndiyo shongwe yavari kuvaka muDubai iyo yakavakirwa paPod
0% mari, new system betas, Apple Store kushanyirwa kwakarambidzwa muFrance uye nezvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac